SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Kunyange zvazvo New Zealand iri kwayo yega, gore negore kunouya vashanyi vanosvika mamiriyoni matatu. Chii chinoita kuti vanhu vaende ikoko?
Kare, vanhu vekuKazakhstan vaigara mumatende. Mararamiro avanoita mazuva ano anoratidzei nezvetsika dzavo?
Vanhu vekuKyrgyzstan vanoremekedza vamwe uye vanogamuchira zvakanaka vaenzi. Vane tsika dzakaita sei?
Chii chinokwezva vanhu kuti vashanyire kanyika aka kubva panotanga gore kusvika parinopera
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kushanya kuSpain
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Zvakaipa Here Kuona Mafirimu Emashiripiti?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe MUKAI! Zvakaipa Here Kuona Mafirimu Emashiripiti?
Zvakaipa Here Kuona Mafirimu Emashiripiti?
MUKAI! Zvakaipa Here Kuona Mafirimu Emashiripiti?